Nhengo dzeZanu PF Dzinokonzera Mhirizhonga muHighfield
Kwaitika mhirizhonga inotyisa pamusika wepaMachipisa mumusha weHighfield muHarare. Mhirizhonga iyi inonzi yakonzereswa nenhengo dzeZanu PF dzanga dzichida kuti vatsigiri veMDC vabviswe pamusika pavanotengesera.
Mhirizhonga iyi yasiya vanhu vakawanda vakuvara.
Zvinonzi nhengo dzeZanu PF dzinosvika mazana matatu dzasvika pamusika weMukambo uyu ndokutanga kuzvindikita vanotengesera pamusika apa dzichida kuti dzisare dzoshandira ipapo idzo.
Vanotengesera pamusika uyu vachibhadhara mari kukanzuru yeHarare vati zviri kuitwa izvi huwori huri pachena.
Vataura neStudio7 pamusika uyu vati nhengo dzeZanu PF idzi dzatematema vanhu nematemo adzawana achitengeswa pamusika uyu asi mapurisa anga aripo anonzi hapana zvaaita.
Vamwewo vati chiri kunyanya kunetsa inyaya yekuti nhengo dzeZanu PF dziri kuda kubhadharisa vanhu mari yakawanda, kanzuru yosara isinei nechekuita nemusika uyu.
Mapurisa azomboedza kuti vagara vachitengesera mumusika uyu vataurirane nenhengo dzeZanu PF idzi asi izvi zvaramba sezvo nhengo dzeZanu PF dzabva dzatanga kurova zvakare vane misika zvabva zvaita kuti mapurisa akande hutsi hunokachidza.
Hutsi hunokachidza uhwu hwakandwawo muchikoro cheChengu Primary icho chakatarisana nemusika uyu zvabva zvaita kuti vana vatize vachisiya zvidzidzo zvavo.
Zvinonziwo nhengo dzeZanu PF idzi dziri kuda kuti vanhu vabhadhare mari yemitero kwadziri vorega kubhadhara kukanzuru yeHarare.
Nhengo idzi dzinonzi dziri kudawo zvakare kuti munhu mumwe chete abhadhare madhora makumi mashanu pamwedzi kwadziri.
Asi vane misika vati mari iyi yakawandisa sezvo vanga vachibhadhara madhora makumi maviri chete kukanzuru.
Mumwe wevane musika paMukambo uyu, VaDenford Machaya, vati zvematongerwo enyika hazvifanirwe kupinzwa panyaya dzemisika iyi.
Zvichakadai, mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, neChipiri vakakurudzira kuti munyika muve nerunyararo.
Asi mutauriri weMDC yaVaMorgan Tsvangirai, VaDouglas Mwonzora, vati Zanu PF inofanira kudzidzisa vatsigiri vayo kuti vasiyane nemhirizhonga vachiti kwese kuri kuitwa mhirizhonga munyika, nhengo dzeZanu PF ndidzo dzinenge dzichiikonzeresa.
Mumiriri weHighfield East mudare reparamende vachimirira MDC-T, VaPearson Mungofa, vaudza Studio 7 kuti zvinoshoresa zvikuru kuti VaMugabe vari kuparidza shoko rekuramba mhirizhonga, asi nhengo dzebato ravo dzichiramba dzichiita mhirizhonga.
Asi mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vati bato ravo rinoziva kuti bato reMDC-T ndiro rinotanga mhirizhonga kuitira kusvibisa zita reZanu PF.
Mutauriri wemapurisa, Chief Superintendent OIiver Mandipaka, vati mapurisa akwanisa kudzimura mhirizhonga iyi nekukasika.
Hurukuro naVaPearson Mungofa
Hurukuro naVaOliver Mandipaka